kuomarara uye kukoshesa - ndeupi musiyano?
Kuru Qa Kukura uye Kukosha - Ndeupi Musiyano?
Kukura uye Kukosha - Ndeupi Musiyano?
Zvese Severity nePamberi zvinhu zvehunhu uye zvinofanirwa kupihwa mu bug bug. Ruzivo urwu runoshandiswa kuona kuti bug rinofanira kugadziriswa nekukurumidza zvakadii.
Kusimba vs. Kukosha
Kukura kwehurema kunoenderana nekukura kwechipembenene. Kazhinji kuomarara kunotsanangurwa maererano nekurasikirwa nemari, kukuvara kwenzvimbo, mukurumbira wekambani uye kurasikirwa nehupenyu.
Kukosha kwekuremara kunoenderana nekukurumidza kuti bug rinofanira kugadziriswa uye kuendeswa kunogara maseva. Kana kuremara kuri kwekukwirira kwakanyanya, sezvingabvira kuchavewo nekukoshesa kwakanyanya. Saizvozvowo, hushoma hwakasimba hurema hunowanzo kuve neakaderera kukoshesa zvakare.
Kunyangwe zvichikurudzirwa kupa ese Severity uye Kukosha kana uchipa chikanganiso chirevo, makambani mazhinji anoshandisa imwe chete, kazhinji kukoshesa.
Mumushumo webug, Severity uye Kukoshesa zvinowanzo zadzwa nemunhu ari kunyora iyo bug ripoti, asi inofanirwa kuongororwa nechikwata chose.
Kukwirira Kwakanyanya - Kukosha Kukosha bhagi
Apa ndipo apo nzira huru kuburikidza nechishandiswa yakaputswa, semuenzaniso, pane eCommerce webhusaiti, vatengi vese vanowana mhosho meseji pane fomu yekubhuka uye havagone kuisa maodha, kana peji yechigadzirwa rinokanda Error 500 mhinduro.
Kukwirira Kwakanyanya - Yakadzika Kukosha bhagi
Izvi zvinoitika kana bhugi ichikonzera matambudziko makuru, asi zvinongoitika mune zvisingawanzo mamiriro kana mamiriro, semuenzaniso, vatengi vanoshandisa mabhurawuza ekare-kare havagone kuenderera nekutenga kwavo chigadzirwa. Nekuti huwandu hwevatengi vane mabhurawuza ekare hwakadzikira kwazvo, hachisi chinhu chakakosha kugadzirisa nyaya.
Kukoshesa Kwakanyanya - Kuderera Kwakanyanya Bug
Izvi zvinogona kuitika kana, semuenzaniso, logo kana zita rekambani risina kuratidzwa pawebhusaiti. Izvo zvakakosha kugadzirisa nyaya nekukurumidza sezvazvinogona, kunyangwe zvingave zvisina kukonzera kukuvara kwakawanda.
Yakakosha Kukoshesa - Yakadzika Severity bug
Kune zviitiko apo bhagi risingakonzere njodzi uye rinongobata vashoma kwazvo vatengi, ese Severity uye Kukosha vanogoverwa zvakaderera, semuenzaniso, iro rekuvanzika peji peji inotora nguva yakareba kutakura. Havasi vanhu vazhinji vanoona iyo yega yega yega yega peji uye kunonoka kurodha hakukanganise vatengi zvakanyanya.
Izvi zviri pamusoro ingori mienzaniso. Ndiro timu rinofanirwa kusarudza Kukura uye Kukosha kwembudzi yega yega.
tsvaga chinhu ne css sarudza
Samsung mazita ekutengesa Galaxy J3 Luna Pro zita
Mashandisiro aungaita yako iPad sechipiri kuratidza kweMacBook yako, iMac: Catalina SideCar iPad Pro dzidziso